Tag: mobiil fara badan | Martech Zone
Tag: mobilo fara badan
Appboy: Fahmaan, Tijaabi oo Ka Qaybgal Isticmaalayaasha Mobilada
Khamiista, Noofembar 7, 2013 Arbaco, Juun 23, 2014 Douglas Karr
Nidaamka deegaanka ee mobilada ayaa ku qarxay in ka badan 1 milyan oo barnaamij saddexdii sano ee la soo dhaafay. Shirkadaha waxay la halgamayaan kharashaadka soo iibsiga isticmaalaha ee sarreeya iyo heerarka haynta oo hooseeya. In ka yar 60% barnaamijyada moobiillada ayaa si wanaagsan ugu soo celiya maalgashiga. Appboy waa xalka xog-kaxeynaya oo u suurta galiya suuq-geynta barnaamijyada moobiilka inay ku abuuraan astaamo isticmaale hodan ku ah dhagaystayaashooda moobiilka, ka dibna ku xoojinaya iyaga oo leh agab ka mid ah alaabada otomatiga suuqgeynta: Ogeysiisyada Riix waxay bixiyaan macluumaad ku habboon, waqtigana ku habboon.
Bageline: Jiid iyo Dhig WordPress Theming
Khamiis, May 12, 2011 Axad, Janaayo 19, 2014 Douglas Karr
Waxaa si la yaab leh, waxaan saakay la hadlayey hay'ad ku saabsan kakanaanta mawduucyada ku dhex jira WordPress. Dadyowga nala midka ah ee labaduba ah kuwa horumariya PHP, waxay sameeyeen tan oo mawduucyo ah iyo waxyaabo sifiican u fahmay WordPress API, ma xuma. Nasiib darrose, taasi ma ahan meel ay gaaraan shirkadaha iyo shaqsiyaadka qaarkood, in kastoo. Guntii iyo gunaanadkii - inaad wacdo soo-saare markasta oo aad jeceshahay inaad wax ka beddesho qaabkaaga ama mawduucaagu qaali buu noqon karaa!